Zvitima zvePulisic zvine U23s zvisati zvadzokera kuChelsea - Tepe RELAY
Zvitima zvePulisic neU23s Chelsea isati yadzoka
Tsoka OL - OL: Chikwata chinoparadza chiitiko cheCornet, iyo…
MaPollsters vanoona boka diki pakati pe…
Boca Juniors vs Gimnasia La Plata - Mutambo Chirevo…
9 h 12 HE
Maneja weChelsea, Frank Lampard, akatiwo kune dzimwe nyika muAmerica Christian Pulisic anodzidzisa pamwe neasina makumi maviri nemaviri klabhu isati yadzokera kuchikwata chekutanga.
Pulisic akatambura nekukuvara kwekuwedzera adductor munaNdira uye takaona kudzoka kwekutanga muna Kukadzi.
Lampard akati ane makore makumi maviri nematatu haakwanise kutamba Muvhuro mukushamisika kweChelsea neManchester United.
• Pogba akazarukira pakudzoka kwaJuve - Raiola
• Source: Chaizvoizvo zvichakwikwidza neBarça yeLautaro
• Pelé anoramba kutaura pamusoro pekuora mwoyo: "Ini ndakanaka"
• Munhu anokunda kudana kuti achinje zita kuTottenham
• Aimbove murairidzi weBarça Valverde anosarudza Aus kuEPL
• Zidane anotora selfie mushure metsaona yemotokari
"Christian akadzidziswa neU23 nhasi, saka haazove akanaka," Lampard akadaro pamusangano wevatori venhau neChishanu.
« Ruben [Loftus-Cheek] haizo yakakodzera pamutambo uyu. Tammy [Abraham] achiri kunzwa mhedzisiro, kuva akatendeseka. Akadzidzisa nhasi, asi zvinoda kuongororwa. "
Pulisic akapedzisira kutamba Ndira 1 mumutambo 1-1 kurwisa Brighton.
Lampard akataura zvakare nezvemutambi weAjax Hakim Ziyech, iyo yakaita saPulisic inotamba kuruboshwe uye joinha Chelsea pakupera kwemwaka mukuvhiya kunogona kuita madhora anosvika makumi mana nemana emadhora.
- Transfer mamakisi: ese makuru mafambiro akacherechedzwa
- Hwindo rekutamisa rinovhurazve rini?
- Zvese zvekutamisa zvakakura zvinoitwa
"Ane kugona kugadzira kubatsira uye kuwana zvibodzwa," akadaro Lampard. “Taive nemabhora mazhinji, asi kwete bhora rekupedzisira. Ndinovimba anogona kuunza mwaka unotevera.
"Achafanirwa kujairana nemabatiro atinoda kutamba pano, asi mhando yacho ichavapo nekumuona." Ndakange ndazviona zvakanyanya. Ndakabayiwa mwoyo mukurwisa naye muTottenham mwaka wadarika.
"Tinoda kuunza vanhu vakanaka uye anonongedza mabhokisi mazhinji." Ndafara. "
Lampard akatiwo kusvika kweMoroccan yenyika hakuvimbisi kubuda kwe Willian et Pedro, naani "Kukurukurirana kunoenderera. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/4052567/pulisic-training-with-u23s-ahead-of-chelsea-return
TELES RELAY 30574 Posts 0 mashoko
Mauto eU.S. anoregedza mufananidzo we40-tsoka tsoka hypersonic missile Sokuvhurisa ... - VIDEO
Tsoka OL - OL: Chikwata chinoparadza chiitiko cheCornet, kudzokorodza kune…
MaPollsters Ona Diki Diki Rakati Amid Virus Epidemic
Boca Juniors vs Gimnasia La Plata - Nhabvu mutambo wenhabvu - Kurume 7…
Mariketi uye maWhitecaps anokanganisa Chicharito Galaxy imba yekutanga